September 5, 2021 N88LeaveaComment on यी ३ महिनामा जन्मनेहरु हुन्छन् धेरै भाग्यमानी, सधैँ दिन्छ भाग्यले साथ !
फरक-फरक महिनामा जन्मने व्यक्तिको भाग्य र व्यवहार पनि छुट्टै-छुट्टै हुन्छ। यसरी भाग्य र व्यवहार फरक-फरक हुनुमा ग्रहहरुको प्रभावको विशेष भूमिका हुन्छ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार ग्रहहरुको शुभ प्रभाव भएको समयमा जन्मने व्यक्तिहरु धेरै नै भाग्यमानी हुन्छन्। सामान्यतया निम्न तीन महिनामा जन्मने व्यक्तिहरु धेरै भाग्यमानि हुन्छन्। जुन ज्योतिषका अनुसार, जुन महिनामा जन्मेका मानिसहरू आर्थिक हिसाबले धेरै भाग्यशाली […]
विद्युत् प्राधिकरणलाई हरेक दिन ४ करोड नोक्सान, कुलमानले नि केही लछारपाटाे लाएनन् !
September 5, 2021 N88LeaveaComment on विद्युत् प्राधिकरणलाई हरेक दिन ४ करोड नोक्सान, कुलमानले नि केही लछारपाटाे लाएनन् !
काठमाडौँ । मुलुकमा विद्युत् खपत वृद्धि हुन नसक्दा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) उत्पादन भएसँगै दैनक चार सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । यसबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई हरेक दिन चार करोड रुपैयाँ नोक्सान परिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बेलुकी केही बेरका लागि १५ सय मेगावाट (उच्चतम माग अर्थात् पिक लोड) खपत भए […]
गगन थापा पौडेल र विश्वप्रकाश देउवा टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार, कसले मार्ला बाजी ?
September 5, 2021 N88LeaveaComment on गगन थापा पौडेल र विश्वप्रकाश देउवा टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशन सुरु भएपछि युवा नेताहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । मुख्य गरी नेविसंघको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका युवा नेताहरूले यसपटक पदाधिकारीमा दाबेदारी दिइरहेका छन् । पूर्व अध्यक्ष कल्याण गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। वर्तमान सभापति शेर बहादुर देउवाबाट प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र रामचन्द्र पौडेल टिमबाट गगन थापा महामन्त्रीको […]
छुद्र सूर्य थापाको आलोचनापछि वामदेव गाैतमको यस्ताे भावुक म्यासेज
September 5, 2021 N88LeaveaComment on छुद्र सूर्य थापाको आलोचनापछि वामदेव गाैतमको यस्ताे भावुक म्यासेज
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका तत्कालिन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले १८ भदौमा एमालेको सबै पद र जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए। माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि लामो समयसम्म तठस्थ वसेर ओली र नेपाल दुवैतिर बार्गेनिङ गरिरहेपनि अन्तिम समयमा उनले नेपाललाई नै रोजे । पत्नी तुल्सालाई पहिला नै नेपालको समाजवादीतिर खुल्न पठाएका गौतमले ओलीतिर आफनो दुनो सोझो नहुने देखेपछि नेपालाई […]
१० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदैनः महासचिव पोखरेल
September 5, 2021 N88LeaveaComment on १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदैनः महासचिव पोखरेल
विराटनगर । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । आइतबार नेकपा एमाले मोरङले मोरङको विराटचोकमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले अदालतले नेकपा एमालेलाई कानुनी रुपमा २०७५ जेठ २ मा फर्काए पनि जेठ २ को अवस्था यान्त्रिक ढङ्गले नहुने […]
एमालेले भन्यो: योगेश भट्टराईलाई एमालेमा कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन
September 5, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले भन्यो: योगेश भट्टराईलाई एमालेमा कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीक्क नेता योगेश भट्टराईलाई एमालेमा कुनै जिम्मेवारी नदिएको बताएको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले पार्टीको प्रवक्ता यागेश कुमार भट्टराई नभएको र अहिले कुनै जिम्मेवारी नदिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । माधव कुमार नेपाल छोडेको समयबाटै प्रवक्ताको जिम्मा फर्किएको भनिएपनि प्रवक्ताको काम प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गरेपछि भइरहेको संशयवीच तामाङले उक्त कुरा […]
यो देशमा म जस्तो कोही छैन : ओली
September 5, 2021 N88LeaveaComment on यो देशमा म जस्तो कोही छैन : ओली
काठमाडौं । अस्वस्थ भएर भेटघाटसमेत स्थगित गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिका स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित भए । सम्बोधनको सुरुमै उनले बढी काम, थकान भएर ज्वरो आएको, तर अस्वस्थ भनेर हल्ला भएको बताए । उनले अघि भने, ‘क्यार कतिसम्म बिरामी भएको हो भन्ने तस्वीर आफैं बोल्छ भने झै बोलेर भनेर […]
एमसीसीविरुद्ध एक्सनमा उत्रिए विप्लव, एकढिक्का हुन २२ दलीय संगठनको आह्वान
September 5, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीविरुद्ध एक्सनमा उत्रिए विप्लव, एकढिक्का हुन २२ दलीय संगठनको आह्वान
काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितको २२ दलीय संगठनले एमसीसीविरुद्ध एकढिक्का हुन आह्वान गरेको छ । गठबन्धनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी निरन्तरको विरोधका कारण अहिलेसम्म एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसकेको र खारेजी नै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एमसीसी पारित गर्नका लागि दबाव सिर्जना गर्नका गर्न परियोजनाकी उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको उल्लेख […]
भदौ २३ गते संसदको कार्यतालिका सार्वजनिक, सुरुमै एमसीसी पेश ! देउवा-प्रचण्ड-माकुनेकाे देश बेच्ने खेल
September 5, 2021 N88LeaveaComment on भदौ २३ गते संसदको कार्यतालिका सार्वजनिक, सुरुमै एमसीसी पेश ! देउवा-प्रचण्ड-माकुनेकाे देश बेच्ने खेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ २३ गतेका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को शनिबारको बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सङ्घीय संसद्को दुवै सदन यही भदौ २३ गते बुधबार ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा बोलाइएको छ । कांग्रेस […]
एमालेले योगेशलाई पार्टीको कुनै जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेपछि !
September 5, 2021 N88LeaveaComment on एमालेले योगेशलाई पार्टीको कुनै जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेपछि !